पिलर आयरका पुस्तकहरू, साहित्यिक क्यारियरको तीन दशक | वर्तमान साहित्य
Pilar Eyre द्वारा पुस्तकहरु
जब एक इन्टरनेट प्रयोगकर्ता खोजी ईन्जिन "Pilar Eyre Libros" मा टाइप गर्दछ, नतिजाले स्पेनमा एक प्रख्यात बौद्धिकको कामको पर्दाफाश गर्दछ। खैर, राष्ट्रिय अडियोभिजुअल मिडियामा प्राप्त कुख्यातता बाहेक, बार्सिलोनामा जन्मे लेखकको तीन दशक भन्दा बढी साहित्यिक क्यारियर छ।
उनको पहिलो पत्रकारिता निबन्ध (१ 1985 XNUMX) केही हदसम्म "गुलाबी" खुलासाले भरिएकोले क्याटालान लेखकको कथा शैली उल्लेखनीय रूपमा विकसित भएको छ। अवश्य पनि, उनको गहिरो आलोचनात्मक आँखा - पत्रकारिता मा एक जीवनकाल द्वारा तीखा - आफ्नो सबै पदहरु को एक अन्तर्निहित विशेषता हो। तसर्थ, आइर जहिले पनि आफ्ना पुस्तकहरूमा एक उद्देश्य केन्द्रित राख्न प्रयास गर्दछ।
1 संक्षिप्तमा पिलर आयरको जीवन
2 पिलर आयरले केहि राम्रा जाने पुस्तकहरू
2.1 रिच, प्रसिद्ध र परित्यक्त (२०० 2008)
2.1.1 पुनर्सफेस गर्न इच्छा
2.2 गोप्य फ्रान्क (२०१ 2013)
2.4 मेरो मनपर्ने र You्ग तपाईंलाई देखिरहेको छ (२०१))
2.4.1 तर्क र संरचना
2.5 एक उत्तम सज्जन (२०१ 2019)
2.5.1 प्लट र सारांश
2.6 म, राजा (२०२०)
3 पिलर आयरको पुस्तक सूची
संक्षिप्तमा पिलर आयरको जीवन
पिलर आयर एस्ट्राडाको जन्म सेप्टेम्बर १,, १ 13 .१ मा स्पेनको बार्सिलोनामा भएको थियो। उनी तीन छोरीहरू मध्ये दोस्रो हुन्, पोन्तेवेद्र कलाकार भिसेन्ते आयर फर्नाडीज र पिलार एस्ट्राडा बोर्राजो डि ओरोस्को बीचको मिलनको परिणाम। युवावस्थामा उनले बार्सिलोना विश्वविद्यालयमा दर्शन र पत्रहरू अध्ययन गरे।
त्यसपछि, आयरले महत्वपूर्ण पत्रकार स्पेनिश अखबारमा आफ्नो पत्रकारिता शुरू गरे। उनीहरु मध्ये, La Vanguardia, संसार, अन्तर्वार्ता y सोमबार पाना। १ 1990 XNUMX ० को शुरुमा आयरले जर्डी गोन्जालेज, जुलियन लागो, जेभियर भास्कुज र मारिया टेरेसा क्याम्पोस जस्ता व्यक्तित्वहरूसँग टेलिभिजनतिर अग्रसर गरे। मुख्यतया, उनी स्पेनिश टेलिभिजन च्यानलमा कार्यक्रमहरूमा देखा पर्‍यो।
पिलर आयरले केहि राम्रा जाने पुस्तकहरू
रिच, प्रख्यात र परित्याग गरिएको (2008)
पिलर आयरको नवौं पुस्तक विभिन्न महिलाको कथा भन्छ - वर्तमान अवधारणामा समायोजित socialite- स्पेनिश कार्यक्रम व्यवसाय को बकाया। केही सुरुचिपूर्ण, अन्य रहस्यमय, र निस्सन्देह सबैले तिनीहरूको जीवनको कुनै न कुनै समयमा प्रदर्शन गर्नुभएका सौन्दर्य र ग्लैमरको लागि आदर गरे। यो सामाजिक स्थिति पुरुषहरु संग जोडीहरु को रूप मा उनीहरुलाई मायालु बनाउने को तथ्य संग थियो।
फलस्वरूप, यी महिलाहरू राजनीतिक, सामाजिक, कलात्मक, सांस्कृतिक प्रकृतिका अनगिन्ती घटनाहरूका वास्तविक ताराहरू बन्न गई। अन्ततः, मुख्य पात्रहरूलाई भावनात्मक रूपमा उनीहरूका साथीहरूले धोका दिए र तिनीहरूका आफ्नै उपकरणहरूमा छोडियो।। त्यसोभए एक पटक शक्ति र प्रशंसाको भावनाले ठूलो निराशाको साथ सबैभन्दा गहिरो पीडाको लागि मार्ग दियो।
पुनर्सफेस गर्न इच्छा
पिलर आयरले नाटकको प्रसंगको फाइदा लिन्छन् कि कसरी गुलाबी प्रेसको अनियन्त्रित क्रूरतासँग मिल्दो छ तात्कालिक प्रसिद्धि। उही तरीकाले, क्याटालानका लेखकले पुनरुद्धार प्रक्रिया र तिनीहरू सबैले देखाइएको आवश्यक हिम्मतको वर्णन गर्दछन् एकान्तमा उठ्न। यी सबै, अझै पनी विश्वास र प्रशंसनीय ईमान्दारी संग विश्वास गर्दा।
धेरै Eyre पाठ मा, मा उनको योग्यता रिच, प्रख्यात र परित्याग गरिएको (तब सम्म) सार्वजनिक रायको लागि अप्रकाशित जानकारी प्रदान गर्न को लागी हो। यसका अतिरिक्त, स्पेनी लेखकले महिलाको अवस्थाका लागि - उनको मापदण्डका अनुसार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुणलाई जोड दिन्छ: सबैभन्दा कठिन परिस्थितिमा प्रतिरोध गर्ने क्षमता।
रिच, प्रख्यात र ...
गोप्य खुलस्त (2013)
कुनै पनि स्पेनिश लेखकका लागि, उहाँ बारे मा एक आत्मीय जीवनी विस्तृत गर्न असम्भव छ। सामान्य फ्रान्सिस्को फ्रान्को छाला नलगाई. जे भए पनि, उनी त्यस्तै मानिस हुन् जसले लगभग चार दशकहरुमा इबेरियन राष्ट्रको सबै शक्ति जम्मा गरे। जे भए पनि, पिलर आयरले "जनरलिसिमो" को सबै भन्दा गोप्य रहस्यहरु अनावरण गर्दा विवरणमा कलम वा स्किपको प्रयोग गर्नुभएन।
Eyre, आफ्नो अनौंठो कहानी शैली संग, स्पेनिश तानाशाहको व्यक्तित्वमा सबैभन्दा निर्णायक घटनाहरूको भ्रमण गर्दछ। सबैभन्दा पहिले, एक दर्दनाक बचपन, जसमा, उनी मद्यपान गर्ने बुबाप्रति सम्पूर्ण परिवारको डरले जम्मा भएका थिए। अर्को, कडा स्वभावको रूढीवादी कारमेन पोलोसँग फ्रान्कोको घनिष्टता उजागर भयो।
त्यस्तै पोलोले आफ्नी छोरीलाई धेरै दमनकारी वातावरणमा हुर्काइन् र आफ्नो पतिप्रति अत्यन्तै ईर्ष्यालु व्यवहार देखाई। थप रूपमा, आयरले फ्रान्कोका अन्य आफन्तहरूको जीवनी विवरणहरू पत्ता लगाउँदछ, साथै तानाशाहको समयमा चिनिएका सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूको पनि खोजी गर्दछ। त्यस्तै अवस्था रामन सेरानो सेर, (त्यस समयमा) राजकुमार जुआन कार्लोस र लुइस मिगुएल डोमिí्गनलगायत अरूहरू थिए।
गोपनीय फ्रान्को: A ...
मेरो मनपर्ने रंग हरियो छ (2014)
आत्मकथा तत्वहरूको साथ यो कार्य, आजको लागि, पिलर आयरको सबैभन्दा प्रशंसनीय पुस्तक हो। व्यर्थमा होइन, यो शीर्षक २०१ 2014 को प्लैनाटा पुरस्कारको लागि फाइनलिस्ट थियो र साहित्यको लागि I जोक्वान सोलर सेरानो पुरस्कारको विजेता। एकरूपमा, जनताले यस प्रेम कहानीलाई अँगाले जसको विकास सुखद आश्चर्यका कारण छैन।
तर्क र संरचना
कोस्टा ब्राभा मा एक गर्मी को समयमा, पिलर आयर तीन रात जोशमा रात बिताउँछिन् एक सुन्दर फ्रान्सेली युद्ध संवाददाता सबास्टिनसँग। उहाँहरु बीच एक गहिरो प्रेम पैदा हुन्छ कि उनी आफ्नो जीवनको प्रेम हासिल गरेको महसुस गर्छिन्। अचानक उनी हराउँछन्। यसले केवल पज्जल सुरागाहरूको पछाडि छोडिन्छ जसले पिलारलाई उसको सबै सीमाहरू जाँच गर्न नेतृत्व गर्दछ।
१ structure अध्यायहरूको संरचनामा उपन्यासले एक जटिल अनुसन्धानको प्रगतिको साथ असली क्षेत्रहरू र व्यक्तिगत प्रकृतिका प्रश्नहरू मिश्रण गर्दछ। यी ब्यबहारहरूका बीच उनको मृतक अभिभावकहरूसँग लेखकको संवादहरू, साथै उनको काम र पारिवारिक सम्बन्धहरूको विवरणहरू हुन्।
मेरो मनपर्ने रंग हो ...
एक उत्तम सज्जन (2019)
आयरले काल्पनिक वास्तविक पात्रहरू (उसको बुवा सहित) अन्य काल्पनिक पात्रहरूको साथ धेरै पूर्ण र मनोरन्जनात्मक कहानी सिर्जना गर्न। एक उत्तम सज्जन श्रमिक वर्गको कठोर दैनिक जीवनको विपरित क्याटालान पूँजीपति वर्गको समृद्धि प्रस्तुत गर्ने उपन्यास हो।
मौरिसियो क्यास्नोभासको जीवनमा यी सबै भएको देखिन्छ: एउटा प्रमुख कपडा कारखानाको उत्तराधिकारीको रूपमा आशाजनक भविष्य, एक सुन्दर र बुद्धिमान महिला संग। थप रूपमा, उनले गृहयुद्ध पछि बार्सिलोनाको धनी कुलीन सदस्यको रूपमा यसमा विलासितापूर्ण जीवन बिताउँछन्।
तर कम्पनीको भ्रमणको क्रममा ऊ आमपारोको प्रेममा परिणत हुन्छ।। त्यसकारण - आफ्नो बुबाको समझदार सल्लाह विरुद्ध - मौरिसियो आफूलाई नयाँ प्रेमीको लागि आफूलाई पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्दछ। सबैभन्दा खराब: बिरामी सल्लाह दिने निर्णयहरूको श्रृंखलामा यो पहिलो मात्र हो जसको नतिजाले उनलाई मृत्युमा सताउनेछ।
एक उत्तम सज्जन
म, राजा (2020)
यो समय, अय्यर आफूलाई स्पेनी अखबारको कभरहरूमा आज प्राय: व्यक्तित्व हुने व्यक्तिको जीवनमा पूर्ण रूपमा डुबाउँछन्: जुआन कार्लोस प्रथम। हामी समकालीन युरोपेली कूटनीतिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजाहरू मध्ये (एक भन्दा महत्त्वपूर्ण नभए) कुरा गर्दैछौं। त्यस्तै गरी, उनी एक राजा थिए जसलाई एक अविश्वसनीय सम्मानको साथ सम्पन्न गरिएको थियो ... २१ औं शताब्दीको क्रममा कम आयो।
यस्तो प्रतिष्ठा गुमाउनुको कारण के हो? के यो लोभ थियो, सायद एक मालकिन, वा हुनसक्छ उनको घमण्ड? पिलर आयरले उपरोक्त प्रत्येक सम्भावनाको विश्लेषण गर्दछन् जबकि पाठकलाई राजाको जीवनको अत्यन्त नजिकको विवरण सहित प्रस्तुत गर्दछन्।। बाल्यावस्थादेखि नै उनका बुबा र फ्रान्कोको कठपुतलीको रूपमा, यस सानो व्यर्थ कासानोभाको माध्यमबाट, एक दुखद गिरावट विवादमा भरिए पछि।
म, राजा (जीवनी र ...
पिलर आयरको पुस्तक सूची
यस लेखमा पहिले वर्णन गरिएका शीर्षकहरू निम्न टाइमलाइनमा हटाइनेछ।
Vips: प्रसिद्ध को सबै रहस्यहरु (1985)।
यो सबै मार्बल्ला क्लबबाट सुरु भयो (1989)।
विद्रोह गल्ली (1992)।
महिला, बीस बर्ष पछि (1996)।
Quico Sabaté, अन्तिम गुरिल्ला (2001)।
फ्रान्कोको अदालतमा दुई Bourbons (2005)।
राज परिवारको रहस्य र झूट (2007)।
शाही उत्कटता (2010)।
मारिया ला ब्राभा: राजाकी आमा (2010)।
रानीको एकाकीपन: सोफिया जीवन (2012)।
घरको रानी (2012)।
मलाई नबिर्स (2015)।
पूर्वबाट एक प्रेम (2016)।
कार्मेन, विद्रोही (2018)।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » Pilar Eyre द्वारा पुस्तकहरु
बच्चाहरूको पुस्तकहरू: चिया स्टिल्टन क्लासिक्स र मार्टिना श्रृंखला